सडकमा पुस्तकः फरक भेटियो देशको नक्सा - Everest Talk
सडकमा पुस्तकः फरक भेटियो देशको नक्सा1 min read
२०७६, १३ आश्विन सोमबार १७:२४
मलाई तनाव छैन । लिनु पनि छैन । लिएर पो के गर्नु ? लिँदैमा म बानेश्वर चोकको भूँइमा त्रिपाल ओछ्याएर किताब बेच्ने दाइको त्रिपाल बन्न पनि त सक्दिनँ । न त भृकुटीमण्डपको अगाडि बारमा किताब बेच्ने दिदीका लागि एउटा समान्य सटर नै बन्नसक्छु । आखिर मैले केही गर्नै सक्दिनँ भने तनाव लिएर मात्र पनि पो के नै पो नापिन्छ र ? म तनाव लिन्नँ । तर तनाव लिन्नँ भन्नुको अर्थ म केही गर्दिन भन्ने पनि हैन । केही गर्न नसके पनि म लेख्न त सक्छु । हो, म अब लेख्छु । कृपया ! ध्यान भंग नपारिदिनुहोला ।
एउटा कुरा, समाज अथवा देशलाई परिवर्तन गर्नुछ भने सबै रवि लामिछाने वा धुर्मुस सुन्तली वा केपी ओली नै हुनुपर्दैन । बस आफ्नो ठाउँबाट आफूले सक्ने काम गर्दा नै छ्यालव्याल हुन्छ । अनि त मैले मात्र हैन कि तपाईँले पनि केही तनाव नै लिनु पर्दैन ।
अँ, देशको कुरा कति गर्नु ? अनि चलेका मान्छेहरूको कुरा गरेर मलाई कसैलाई सेलिब्रेटी बनाउनु पनि छैन । आउनुहोस् आज फरक कुरा गरौँ । राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणजस्तो होस् वा उनको जन्ती टोली कि जम्बो टोली जे होस्, त्यो कुरा अर्कै हो । तर मेरो मनलाई काउकुति लगाइरहेको कुरा भने अर्कै छ । तपाईँ तयार हुनुहुन्छ ? यदि छेउछाउमा हल्ला छ वा अन्य कोही सज्जन हुनुहुन्छ भने कानमा इअरफोन घुसार्नुहोला ।
बानेश्वर चोकमा निक्लेर कसैलाई २ घण्टा पर्खिनुपर्यो भने के गर्ने ? रत्नपार्कमा कसैलाई पर्खाउनुपर्यो भने के काम दिने ? कि त चिया पिउँदै गर भन्नुपर्छ कि त नास्ता खाँदै गर, अझ कसैकसैलाई त खम्बा ढाल्दै गर भन्न पनि सकिन्छ । तर, दुर्भाग्य “कखग‘ पुस्तकालय गएर चिया पिउँदै पढ्दै गर” वा म कोटेश्वरको एबीसी‘. पुस्तकालयमा हुन्छु भनेर कसैलाई भन्न मरिकाट्टे पाइन्न । यो एउटा दुर्भाग्य नै त होला ।
यो सहरमा खाली समय पढेर बिताउँछु भन्ने मान्छेहरूको उसै पनि कमी छ । ज्यादै थोरै मान्छेहरू समय निक्लेको बेला सिर्प पढी टोपलिदिऊँ न त भनेर पढ्छन् । पढ्नकै लागि समय निकाल्नेहरूलाई सायदै एउटा साझा यातायातमा कोचकाच पार्दा अँटाउन सकिएला ।
किताबको कुरा गरिरहँदा यसको शरीर ठूलो छ । बस्, आज ती पुस्तकहरूको मात्र कुरा गर्छु जुन पुस्तक पसलबाट किनिदैनन् । अझ भनौ भने सटरबाट बेचिदैनन् । बरु फूटपाथबाट किनिन्छन् । सडकबाट बेचिन्छन् ।
तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ, किताब किन्छु भनेर निक्लेका अधिकांश मान्छेहरू कहिल्यै पनि फूटपाथमा किन्दैनन् । उनीहरूको लागि त यतिका पब्लिकेसन हाउसहरू छन्, तिनीहरूका आफ्नै बुक हाउस छन् । अनि अझ अन्य के के हो केके जाति पुस्तक पसलहरू पनि छन् ।
अब सोच्नुहोला कि त्यसो भए फूटपाथमा चाहिँ किताब मर्निङ वाकमा निक्लेकाले किन्छन् त ? तपाईँ गलत हुनुहुन्छ । विहानको समयमा फूटपाथमा किताब बेच्नेहरू आउँदैनन् । खै किन हो, मलाई थाहा छैन । तर, मलाई यो थाहा छ कि बिहान ढलेपछि दिउँसो हुन्छ । दिन साँझमा ढल्ने तर्खरमा रहँदा भने उनीहरू पक्का केही थान किताबहरू लिएर सडकमा झुल्किन्छन् । फूटपातमा उदाउँछन् ।
मैले पनि यो सहरमा मेरा सुरुका दिनहरूमा पहिलो किताब फूटपाथबाट नै किनेको हुँ । तर त्यो दिन म किताब किन्न नै भनेर चाहिँ कोठाबाट निक्लिएको थिइनँ । बरु म कसैलाई भेट्न निक्लिएको थिएँ हुँला । हो, सडकले किताब किन्ने मनसाय बनाएर कोठाबाट निस्किएका मान्छेहरूलाई खास्सै किताब बेच्दैन । उसले उसै घुम्न हिँडेकाहरूलाई बेचिदिन्छ । कि त लुगा किन्न हिँडेको । कि त डेटको लागि हिँडेको र कहिलेकहीँ चिया वा कफी पिउन हिँडेको ।
म सडक प्रेमी हुँ । सडकलाई आफ्नो धरातल सम्झनेहरू मलाई आफन्तजस्ता लाग्छन् । मलाई सडकमा लम्पसार पल्टेका किताबहरू पनि आफ्ना लाग्छन् । यदि मलाई पढ्न मन लागेर पनि पढ्न नपाएको पुस्तकले फुटपाथबाट घुरिरहेको देखेँ भने त्यसलाई कैद गरिहाल्छु (गोजी खाली छैन भने) ।
त्यस्तै अस्तिमात्र पुतली सडक हुँदै भृकुटी मण्डपलाई गन्तव्य बनाएर बतासिँदै गर्दा प्रदर्शनी मार्गमा एक दिदीसँग ढोक्किन पुगेँ । अँ ‘ दिदीसँग हैन, उनले फिजाएर राखेका केही थान किताबहरूसँग । बुझ्नुहोस् कि तपाईँ पुस्तकसँग जसरी मान्छेसँग ठोक्किनुभयो भने ढुक्कले सास फेर्न सक्नुहुन्न ।
म त्यसरी ठोकिएको पुस्तकको नाम थियो, ‘फात्सुङ’। ‘फात्सुङ’ को बारेमा आफैँ सोच्नुहोला । म ती दिदीको कुरा गर्छु ।
किताबहरू एकदमै थोरै थिए, पहिलेको तुलनामा ।
‘‘दिदी ! यसको कति ?’’ फात्सुङ् मेरो हातमा ।
‘‘तीन सय ।’’ दिदीको ओठमा प्रियाको झैँ मुस्कान ।
‘‘किताबहरू यति थोरै किन ?’’ फिजाएर राखेको उही गोडा बिसेक किताबहरूमा आँखा दौडाउँदै सोध्छु ।
मलाई किनकिन केही सोध्नु नभएरै पनि सोध्न आयो । बोल्नु नभएरै बोल्न आयो । कहिलेकाहीँ बोल्छु भनेको मान्छेसँग पनि बोल्न सकिँदैन । केही भन्छु भनेको कुरा पनि भन्न सकिँदैन । कोही ठाउँ यस्तै भइदिन्छ । बोल्छु नभनेरै पनि बोलिपठाइन्छ ।
‘‘महानगरको गाडी कुन बेला आउँछ, थाहा हुन्न । धेरै ल्याएर के गर्नु ?’’ उनी अलि फरक लवजमा बोल्छिन् ।
‘‘के गर्छ र महानगरले ?’’
‘‘उठाएर लग्दिन्छ नि सबै । सडकमा नपाउने रे पसल राख्न ।’’
‘‘यसले के डिस्टर्ब होला र सडकलाई ?’’
‘‘खै, महानगरलाई नै थाहा होला ।’’
‘‘अनि किताबहरू उठायो भने फेरि दिँदैन र ?’’ म पाँच सयको नोट दिँदै सोध्छु ।
उनी आफ्नो पर्सबाट दुई सय फिर्ता दिँदै भन्छिन, ‘‘पहिले त फाइन तिरार दिन्थो । अहिले दिँदैन रे !’’ उनी पुनः बिसको नोट दिँदै भन्छिन्, ‘‘छुट ।’’
यो ‘रे’ को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ पत्याउन पनि सक्नुहुन्छ र नपत्याउन पनि पाउनुहुन्छ ।
‘‘तपाईँहरूलाई चाहिँ कति छुटमा दिन्छ नि पब्लिकेशनले ? ३५ ?’’ उनकै बिस रुपियाँ छुटलाई टेकेर अर्को प्रश्न जन्माउँछु ।
‘‘काँ त्यत्रो पाउनु र ? पब्लिकेसनबाट ल्याउँदा पुरै कार्टुन ल्याउनुपर्छ । हामीले के गर्नु र त्यत्रो ल्याएर ?’’
‘‘अनि काँबाट ल्याउनुहुन्छ त ?’’
‘‘ए भनेसी पच्चीससम्म चाहिँ देलान हैन ?’’
‘‘अँ ‘ अरुले किनेजस्तै त हो । त्यही हो दशदेखि पच्चीस प्रतिशतसम्म दिन्छन् । हेरी हेरी ।’’ उनी अलि सहजगरि बोल्छिन् ।
तपाईँले विचार गर्नुभएको छ कि छैन, मलाई थाहा छैन । तर कोही अपरिचितसँग पहिलो शब्द साट्नु नै गाह्रो कुरो हो । यदि तपाईँ केही शब्द साट्न सक्षम हुनुभयो भने एक घण्टा आरामले बात मार्न सक्नुहुन्छ ।
‘‘अनि घरमा को को हुनुहुन्छ नि ?’’ अब म पुस्तकको बाटो भएर ती दिदीको नजिक भइसकेको छु ।
‘‘नानी र हस्बेन्ड ।’’ उनी पनि मभन्दा खास्सै टाढा रहिनन् अब ।
‘‘अनि हस्बेन्ड के गर्नुहुन्छ ?’’
‘‘केही नही । विदेशको प्रोसेसमा हो ।’’
‘‘ए . . . अनि छोरी कत्री छिन् ? कतिमा पढ्छिन् ?’’
‘‘सानै छ । एलकेजीमा पढ्छे । बोर्डिङ् ।’’
बोर्डिङ्भन्दा उनको अनुहारमा मुस्कान फुलेको थियो । यदि त्यो ठाउँमा सरकारी स्कुल हुन्थ्यो त पक्का त्यस्तो हुनेथिएन ।
‘‘अनि अब यही बीस थान किताब यसरी फिजाएर यो सहरमा बाँच्न सकिन्छ र ?’’
‘‘पहिले त सकिन्थ्यो अब गाह्रो छ । महानगरले हामी जस्तैलाई हो रहेछ खेदो गर्ने । देश नै सक्नेलाई चाहिँ कसैले केही गर्नसक्ने होइनन् ।’’
उनी केही भावुक बन्छिन् । म केहीबेर उनको त्यो मलिन अनुहारमा एकोहोरिन्छु । भन्छु,
‘‘बरु त्यो श्रीमान विदेश जाने पैसामा अरू केही थपथाप गरेर पुस्तक पसल नै खोल्दा के हुन्न होला र ?’’
उनी केही बोल्दिनन् । म केहीबेर उनको अनुहारमा एकटकले हेर्छु । उनी एउटा टालोले किताबको धूलो पुछ्न थाल्छिन् । फेरि दोह्र्याएर प्रश्न गर्नुको औचित्य म पनि देख्दिन् । “धन्यवाद दिदी !” भन्छु र आफ्नो बाटो लाग्छु ।
अखिर कति प्रश्नका उत्तरहरू मौनताले जति स्पष्ट शब्दले दिदैनन् होला । ती दिदीको मौनतको उत्तर मैले त बुझेँ, तपाईँले बुझ्नुभयो ?
अँ .. अब केही मेरा कुरा छन्, तपाईँलाई फुर्सद भए सुनिदिनुहोला । छैन भने अब तपाईँ यो मेरो ल्याङल्याङबाट मुक्त हुनसक्नुहुन्छ ।
फूटपाथलाई सफा राख्नु गलत पक्कै होइन । महानगरले सडकमा बेच्न राखिने सबै सामान उठाइदिन्छ, पुस्तकमात्र के कुरा ? सहरलाई सफा राख्नु महानगरको दायित्व पनि त हो । तर, केही सोच्नुपर्ने कुरा भने अवश्य छन् ।
पहिलो त यो सोच्नुपर्याे कि महलमा व्यापार गर्ने मात्र होइन कि सडकमा आफैँलाई फिजाउनेहरू पनि नगरबासीहरू हुन् । सडकमा पानीपुरी वा चटपटे बेच्ने, साना पसल राख्ने, चिया बेच्ने आदिलाई महानगरीबाट खाटाइएका अधिकारीहरूले अमानविय र अनागरिकलाई झैँ व्यवहार गरेको मेरै यी दुई आँखाले बहुत पटक देखेका छन् । सडक हिँड्नका लागि हो, यहाँ पसल थाप्नु गलत हो । म मान्छु । तर महानगरले सहरलाई सही बनाउन गरिरहेका कयौँ कामको शैली पनि गलत छन् । तपाईँले स्वीकार्नैपर्छ ।
सडकमा आफ्नो जीवन बिछ्याउनेलाई एक पटक कारवाही गर्दा पनि पुनः पटक पटक किन त्यही सहरमा निस्कन्छन् ? किनकि उनीहरूले सडकभन्दा टाढा आफ्नो जीवन देखेकै छैनन् ।
अब सडक कसरी खुल्ला राख्ने, साना पसलेहरूबाट ? उत्तर छ । त्यो के भने, सडकमा जीवन बिछ्याउनेहरूलाई विस्थापन होइन कि व्यवस्थापनको खाँचो छ ।
Tags: किताबकृष्ण ढुङ्गेलकेपी ओलीधुर्मुस सुन्तलीफूटपाथरवि लामिछानेसडकमा पुस्तकः फरक भेटियो देशको नक्सा